संसद्मा प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसबीच हंगामा ! [भिडियो]
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको शब्दले संसदको गरिमा घटाएको भन्दै कांग्रेसले हंगामा गरेका हुन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीबाट संसदको गरिमा कायम नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा हंगामा गरे ।
नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले सांसदले उठाएका प्रश्नलाई ’आक्रोश, निम्छरा र कुण्ठा अभिव्यक्ति’ भन्ने प्रधानमन्त्री अन्त कहाँ पाइएला? भन्दै लोकतन्त्रमा संसदको गरिमा कायम नभएको बताए । उनले भने, ‘यो लोकतन्त्र होइन । यो भन्दा नराम्रो काम संसदीय अभ्यासमा हुन सक्दैन । हामी जनतामाझ जान्छौँ ।’ सभामुख महराले पटक–पटक सांसदलाई आसन ग्रहण गर्न आग्रह गरेका थिए ।
सभामुखको आग्रह अटेर गर्दै विपक्षी सांसदले उभिएर विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्ने सांसद्को अधिकारको विषय भएको उल्लेख गर्दै मर्यादित ढङ्गबाट प्रश्न गर्न पाइने बताए । उनले भने, “अमर्यादित शब्द बोल्न पाइँदैन, प्रश्नको सीमा र मर्यादा हुनुपर्छ ।” कांग्रेस सांसदको विरोध बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्रीले पुनः भने, “प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ कि छैन ? म यहाँ जवाफ दिन उभिएको हो ?”
जिमी ‘राई’ उत्थान समाजको २१ औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न [भिडियाे]
गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई भने–धपेडी भयो बा, अब विश्राम लिनुस्
मुगु, हुम्ला र जुम्लामा कहाँ छ सरकार ? : सांसद् यूटोल तामाङ
पर्यटनमन्त्री भट्टराईको आगामी कार्ययोजना र प्रतिबद्धता [भिडियो ]
नेपालको विश्वकप खेल्ने सपनामा पूर्णविराम ! [Full Match]
कुवेतविरुद्ध नेपालको शानदार जीत, पारसको अर्धशतक [Full Match]
शनिबार, ११ श्रावण, २०७६